Umzi mveliso we-4050-5000mAh, abaXhasi - China 4050-5000mAh Abavelisi
Ibhetri ye-Li-po 5565113 3.7V 5000mAh Iseli yebhetri yeSithethi seBluetooth, Ifowuni, iBhanki yamandla, Iselfowuni
Ukutshaja kwakhona i-PLM-5565113 3.7V 5000mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Li-po Ibhetri 605890 3.8V 4900mAh Iseli yebhetri yeSithethi seBluetooth, iithoyi, iBhanki yamandla
Ibhetri ye-PLM-605890 3.8V 4900mAh esetyenzisiweyo isebenzisa ezona zixhobo zinomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri yokuvuza kwegesi enegesi enye iLear Alarm Ibhetri ye-ERT-04 3.7V 4600mAh Polymer Lithium Ibhetri yeDisitho yegesi eNxalenye
Ibhetri etsha ye-PLM-ERT-04 3.7V 4600mAh isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.